Kedu ihe nkpuchi mkpuchi na gịnị ka eji ya eme?
Mast solder bụ akụkụ dị oke mkpa nke kọmpụta sekit PCB ebipụtara, enweghị obi abụọ ọ bụla na mkpuchi mkpuchi ga -enyere aka mgbakọ, mana kedu ihe ọzọ ihe nkpuchi mkpuchi na -enye aka? Anyị ga -amatakwu gbasara nkpuchi solder n'onwe ya. Kedu ...
Kedu ihe CCL kachasị ewu ewu ejiri mee PCB?
N'ọhịa bọọdụ sekit eletrọnịkị, iji wee nweta ihe achọrọ ngwaahịa, ọtụtụ CCL na -enubata n'ahịa. Kedu ihe bụ CCL? Kedu CCL kachasị ewu ewu na ọnụ ala? Ọ nwere ike ọ gaghị elekwasị anya maka ọtụtụ ndị injinia elektrọniki obere. N'ebe a, ị ga -amụta ọtụtụ ihe ...
Gịnị ka anyị kwesịrị ịma banyere Chinese PCB emeputa?
Site na mmepe ngwa ngwa teknụzụ elektrọnik na China.More na ndị nrụpụta PCB China ọzọ na -enye ndị ahịa gburugburu ụwa ọrụ ha kacha mma. ...
Kedu ihe kpatara anyị ji eme ka PCB dị ka mbughari?
N'ime usoro nrụpụta PCB, a na -ewe anyị iwe ka anyị kpachapụ PCB ka ọ bụrụ taabụ ime ihe maka mbadamba mbadamba anyị. N'ebe a, anyị ga -enye gị nkọwa zuru ezu nke usoro ịpị taabụ. Gịnị bụ ngagharị usoro taabụ? ...
Kedu ihe kpatara mkpuchi mkpuchi dị mkpa maka PCB?
Maka ọtụtụ ndị injinia elektrọnik, ikekwe, ha bụ ọkaibe n'ịmepụta bọọdụ PCB ha, ha makwa nke ọma ụdị ebe ọrụ PCB ha ga -etinye na ya, mana ha amaghị etu ha ga -esi chebe bọọdụ sekit na ihe ndị mejupụtara ya wee gbasaa. ..
Kedu ihe kpatara BOM bụ isi nke Mgbakọ PCB
Kedu ihe bụ 'Bill Of Materials -BOM' BOM bụ ndepụta nke akụrụngwa, akụrụngwa na mgbakọ dị mkpa iji wuo, rụpụta ma ọ bụ rụzie ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ. Ụgwọ ihe na -apụtakarị n'ụdị ọkwa, yana disp ...
Kedu otu esi achọta onye nrụpụta PCB dị mma na China?
N'oge a, yana ịrị elu PCB chọrọ nke ukwuu. Ọtụtụ ndị na -emepụta PCB na -apụta, ọkachasị na China nke a maara dị ka ụlọ ọrụ ụwa. Ndị ahịa gburugburu ụwa na-achọ onye nrụpụta PCB dị elu na China, Agbanyeghị, kedu ka anyị ga-esi nweta ...
Nrụpụta PCB dị ọnụ ala na China
A bịa na ụlọ ọrụ elektrọnik PCB, ndị mmadụ na -atụgharịkarị uche ha n'ahịa China. ha na -ahọrọ ịchọ onye nrụpụta PCB na China, Gịnị kpatara nke a ji bụrụ ihe ama ama maka ndị injinia gburugburu ụwa bụ ajụjụ. ...
Kedu otu esi emepụta ọmarịcha silkscreens nke enwere ike ịgụ?
PCB Silkscreen na -ejikarị ndị injinịa arụpụta na Mgbakọ PCB, Agbanyeghị, Ọtụtụ ndị na -emepụta PCB na -eche na akụkọ silkscreen adịghị mkpa dị ka sekit, yabụ na ha achọghị ịma banyere akụkọ akụkọ na ọnọdụ ọnọdụ, Gịnị bụ PCB imewe silkscreen maka ihe ...
Kedu ihe bụ Rigid Flex PCB na gịnị kpatara ya?
Site na mmepe nke teknụzụ eletrọnịkị, bọọdụ sekit, dị ka onye na -ebu ngwa elektrọnik na -enweghị ike ekewapụ na ndụ anyị, ihe ndị dị elu na ihe dị iche iche nke ngwaahịa elektrọnik abụrụla ihe mkpali nke mmepe nke teknụzụ bọọdụ sekit ...
Kedu ihe bụ impedance na bọọdụ PCB?
A bịa na impedance, ọtụtụ ndị injinia nwere ọtụtụ nsogbu na ya. N'ihi na enwere ọtụtụ mgbanwe na -emetụta uru nke impedance a na -achịkwa na bọọdụ sekit e biri ebi, agbanyeghị, gịnị bụ impedance na gịnị ka anyị kwesịrị ịtụle mgbe impedance na -achịkwa? ...
Kedu faịlụ achọrọ maka nrụpụta na ịhazi PCB gị?
Iji mezuo ihe ndị injinia elektrọnik dị iche iche chọrọ, ọtụtụ sọftụwia ihe eji arụ ọrụ na -apụta maka ha ịhọrọ na iji, ụfọdụ bụ n'efu. Agbanyeghị, mgbe ị nyefere ndị nrụpụta na PCB faịlụ gị imewe, enwere ike ịgwa gị na ọ baghị uru ...